Dib u dhac ku yimid wahadalladii heshiis kordhinta Marcus Rashford ee kooxda Manchester United – Gool FM
(Liverpool) 18 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wajihi doonto dagaal adag si ay uga dhaadhiciso weeraryahankeeda Marcus Rashford inuu u saxiixo qandaraas cusub oo uu ku sii joogayo garoonka Old Trafford.
Rashford ayaa heshiiskiisa kooxda Man United waxa uu ku eg yahay xagaaga soo socda, inkastoo ay Red Devils ay dooq u haysato inay heshiiskiisa ku kordhiso 12 bilood oo kale.
21-sano jirkaan ayaa dhaliyey 13 gool, waxaana uu caawiyey sagaal gool oo kale intii lagu guda jiray xilli ciyaareedka 2018-19, laakiin waxa ay u muuqataa in tiro ka mid ah xiddigaha ay isku kooxda yihiin ay isaga tagi doonaan naadiga, kaddib markii ay ku adkaatay inay qaab ciyaareed sare ah ku soo bandhigaan isbuucyadii u dambeeyay ee xilli ciyaareedka.
Sida uu warinayo Wargeyska The Sun, Rashford ayaa marka hore doonaya inuu qiimeeyo ujeedada Man United ka hor inta uusan go’aansan in uu saxiixo qandaraas cusub oo uu ku sii haynaya kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Manchester United ayaa ka ciyaari doonta tartanka Europa League xilli ciyaareedka soo socda kaddib markii xilli ciyaareedka 2018-19 ay kaalinta lixaad kaga dhammaysteen kala sarreynta horyaalka Premier League.